रामधुनीको ३ नं. वडा महिला समितिबाट निःशुल्क तिन महिने सिलाई कटाई तालिम – Radio Ramdhuni 91.9 Mhz
रामधुनीको ३ नं. वडा महिला समितिबाट निःशुल्क तिन महिने सिलाई कटाई तालिम
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०३, २०७५ समय: १३:१३:१३
झुम्का,चैत्र ३ । महिला उद्यमिकालागी रामधुनी ३ नम्बर वडा महिला समितिको आयोजनामा तिन महिने सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन गरेको छ । सिलाई कटाई सिपले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने उधेश्यले वडाकार्यालयको सहयोगबाट आईतवारबाट सुरु गरिएको हो ।
महिला समितिका कोषाध्यक्ष गिता श्रेष्ठको सभापत्विमा भएको उद्धघाटन कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष राजकुमार चौधरीले महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याएको रु ५० हजार रकमले तालिम सञ्चालन गरेको बताए । थोरै रकम भएपनि यसबाट पचाँसलाख सम्मको उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने बताए । तालिम लिएर ब्यवहारिक रुपमा लागु गर्दै आर्थिक उपार्जन तर्फ लाग्न सके धेरै ठुलो उपलब्धि हुने वडाअध्यक्ष चौधरीले बिश्वास ब्यक्त गरे ।
वडाकार्यालयको भवनमा ३० जनालाई तालिम दिने वडासदस्य टिका लक्ष्मि श्रेष्ठले बताईन् । महिलाहरुमा आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न तथा सिपकालागी वडाबाट रकम बिनियोजन गर्दै तालिमको आयोजना गरेको जानकारी दिईन् । वडासदस्य नारायण श्रेष्ठ लगायतको अतिथिहरुको उपस्थितीमा वडाकार्यालयकै भवनमा उद्धघाटन गर्दै तालिम सुरु गरेको आयोजकले जानकारी दिए ।